Dib-ugu-laabashada dugsiga ee Excelsior | Iskuulada Dadweynaha Minnetonka
Qorshaha 2020-21 ee Ku laabashada Dugsiga wuxuu diiradda saarayaa, marka ugu horreysa, tan ugu sareysa, sidii loo siin lahaa jawi nabdoon dhammaan ardayda iyo shaqaalaha ka dhex dhici doona dhismayaashayada. Qoysaska aan ku kalsoonayn wax-barashada shaqsiyeed waxay awood u yeelan doonaan inay doortaan ikhtiyaarka elektaroonigga ah. Ujeeddada ayaa ah in la hubiyo in qoys kasta uu awoodo inuu sameeyo doorashada ugu habboon iyaga.
Fiiri Qorshaha Dugsi 2020-21
Faahfaahinta Xulashada Hybrid
Faahfaahinta Xulashada e-barashada
Nidaamyada Xafiiska Caafimaadka iyo Macluumaadka Muhiimka ah
Dulmarka Jadwalka Hybrid
Fasalada K-3 Ardayda waxay ku qaadan doonaan shan maalmood jir ahaan dugsiga, 8: 00-2: 40 dugsiga Excelsior.
Fasalada 4-5-aad waxay joogi doonaan Isniinta-Khamiista-Khamiista, 8: 00-2: 40 at MHS, iyadoo Arbacada ay tahay maalin e-waxbarasho ah.
Dhammaan fasalada oo dhan waxay noqon doonaan 50% ama ka yar.
Awoodda baska oo xadidan 50%, looma bixin karo kaar bas ardayda ardayda inay raacaan bas kale waqtigan.
Fadlan raac jadwalka hoose si aad u dejiso:
Magaca dambe wuxuu bilaabmaa AM, 7: 50-8: 00am
Magaca dambe wuxuu bilaabmaa NZ, 8: 00-8: 10am
Ardayda dugsiga barbaarinta iyo ardayda fasalka 1aad waa in laga tuuraa oo laga soo qaado Oak Street Drop off.
Ardayda fasalada 2-aad iyo 3-aad waa in laga tuuraa oo laga soo qaado qeybta dambe ee wareega.
Waxaan ula qabsan doonaa sidii loogu baahdo. Waxaan fahamsanahay in howshu ay qaadan doonto waqti dheeri ah sanadkaan oo aan uga mahadcelineyn dulqaadkaaga.
Faahfaahinta Badbaada Nabdoonaanta iyo Borotokoolka
Muhiimadeena koowaad waa in iskuulku u noqdo sida ugu macquulsan ee ardayda iyo shaqaalaha. Marka lagu daro tilmaamaha caafimaadka iyo badbaadada ee degmada oo dhan, borotokoollada gaarka ah ee Excelsior waxaa ka mid noqon doona kuwa soo socda:
Maaskaro waxaa loo baahan yahay in la xidho mar kasta, haddii aan laga saarin ujeedo tilmaam ah (muusig khaas ah ama howlo caafimaad, ama ka-reebitaan kale oo maaskaro ah sida uu farayo MDH iyo MDE). Waxaan raaci doonnaa Nidaamka Daboolida Wajiga Degmooyinka dhammaan kiisaska u hogaansanaanta shuruudaha maaskaro.
Qaadashada iyo Ka Baxida
Ardayda waxay gali doonaan dhismaha meelaha laga soo galo (ka raadi macluumaad gaar ah usbuuca soo socda).
Shaqaalaha kormeerka ayaa xaqiijin doona hubinta heerkulka waxayna hubinayaan in ardayda ay galaan dhismaha oo ay si toos ah ugu galaan fasalkooda.
Waxaan lahaan doonnaa shaqo ka eryis waqtigeedii lasaaray. Ardayda lagu qaado gaari qaas ah ama raaco baska ayaa ka bixi doona ogeysiisyada, xilliyo kala duwan.
Calaamadaha isdhaafsiga bulshada ayaa la dhigi doonaa si looga caawiyo ardayda jihaynta meelaha la wadaago.
Ardaydu waxay bilaabi doonaan sannadka cunida qado ee fasaladooda (ama banaanka, ogolaanshaha cimilada) u dhexeeya lix fiid.
Ardayda waxay heli doonaan fursado ay ku maqnaadaan banaanka maalintii oo dhan.
* Fadlan ka eeg Degelka Dugsi ee Iskuulka 2020-21 wixii macluumaad dheeri ah, oo ay ku jiraan borotokoolka caafimaadka iyo tillaabooyinka nabdoon ee meesha yaalla.
Ardayda dooranaysa ikhtiyaarka buuxa e-Learning waxay raaci doonaan jadwal lamid ah sida ardayda isku-dhafan (oo qaarkood ay ku kala duwanyihiin guriga), oo leh macalin khadka u go'an oo dhammaan ardayda kaqeybqaata barnaamijka elektarooniga ee buuxa.
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan nooca e-barashada ayaa ah hoosta iyo qeybta e-barashada ee Degelka Ku-noqoshada Dugsiga ee Degmadda.
Ardayda waxaa lagu qori doonaa qaybta elektarooniga ah oo ay weheliyaan macalin heersare ah iyo ardayda kale ee soo xushay doorashadaas markasta oo ay suurtagal tahay.
Barashada elektaroonigga ah waxay la mid tahay baaxadda / isku xigxiga / jadwalka sida barashada shaqsiga ah. Ardayda waxay uga gudbi karaan khadka tooska ah uguna gudbi karaan dhamaadka rubuc walba.
Maalmaha e-barashada waa maalin dugsiyeedyo caadi ah oo loogu talagalay ardayda iyo macallimiinta.
Ardayda ayaa heli doona manhajka heerka fasal oo buuxa, oo ay ku jiraan fasalada takhasuska leh.
Ardayda waxaa la siin doonaa jadwal joogto ah oo wax lagu baro. Waxbaristu waxay noqon doontaa isku dhaf isku mid ah (socodsiinta tooska ah) iyo nashaadaadka waxbarasho ee sinnaanta ah waxaana ku jiri doona nashaadaadyo waxbarasho oo dhijitaalka iyo dijitaalka ah, sida aqrinta buug, qorida jawaab, ama dhameystirka mashruuc.
Ardayda waxay adeegsan doonaan aalado teknolojiyad kaladuwan waxaana la siin doonaa qoraal iyo agab ay ugu baahan yihiin inay ku taageeraan waxbarashadooda.
Xiriirku wuxuu muhiim u yahay barashada. Dadaal weyn ayaa la sameyn doonaa si loo horumariyo xiriirka ka dhexeeya ardayda iyo macallimiinta, macallimiinta iyo waalidiinta iyo ardayga ardayga.
Waalidku waa qayb muhiim ka ah guusha ardayga. Taageero qaas ah iyo waalidiinta socota iyo wada xiriirka macallimiinta ayaa ka mid noqon doona ku laabashada dhacdooyinka dugsiga, sida hanuuninta fasalka loo dejiyey iyo aaladaha isgaarsiinta, xiriir joogto ah iyo kulamada fasalka ee macallinka, iyo fursadaha hal kulan hal macallinka la yeeshaan.
Dhammaan barnaamijyada waxaa la bixin doonaa oo ay ku jiraan baabtiis, awood sare, dardar, iyo fasallo horumarsan. Waxay kuxirantahay isqorista koorsada, barnaamijyada qaar waxaa lagu bixin karaa iyadoo la adeegsanayo qulqulka tooska ah si ardayda ardeyda toos loogu helo. Barnaamij dhammaystir ah iyo soo bixitaan ah ayaa lagu bixin doonaa labadaba qaab isku mid ah iyo qaab-dhismeedka loo yaqaan 'asynchronous'.
Degmadu waxay sharfi doontaa IEPs iyo 504s waxayna siin doontaa taageero dheeri ah ardaydayada hela adeegyada waxbarashada gaarka ah iyo ardayda kale ee u baahan taageero sare.
Fadlan hubso inaad cusboonaysiiso macluumaadkaaga xiriirka ee Skyward oo aad ugu yaraan ugu yaraan 2 lambarro taleefan ah iyo 2 xiriiro deg-deg ah oo deegaanka ah.
Hubso in sanduuqa codkaaga uusan si buuxda u hor istaagaynin inaanu fariin kuugu dirno !!
Fadlan ka jawaab taleefankaaga haddii aad ka aragto 952-401-5650 shaashadaada. Taasi waa lambarka ugu weyn ee Excelsior-ka, qofna wuxuu isku dayayaa inuu kula soo xiriiro.
Haddii lagula soo xiriiro maxaa yeelay ardaygaagu wuu xanuunsan yahay oo u baahan inuu guriga aado, filashadu waa in laga soo qaado xafiiska caafimaadka 30 daqiiqo gudahood. Hadeysan taasi suura gal aheyn waxaan u baahanahay inaad soo wacdid xiriirikaaga xaalada degdega ah.
Dib u eeg bogga internetka ee degmada si aad ula socotid qorshaha Iskuullada Dadweynaha Minnetonka ee sanad dugsiyeedka 2020-21 oo ay kujiraan siyaasada maaskaro, hubinta heerkulka iyo goorta aad ubadkaaga ka ilaalinayso dugsiga marka aan fiicnayn. Ilmo kasta oo muujinaya astaamaha jirrada waxaa loo diri doonaa guriga.
Fadlan hubso in talaalka ardaygaagu yahay mid casriyeysan oo waraaqaha loo diro xafiiska caafimaadka maalinta ugu horeysa ee dugsiga. Waxaad emayl ugu diri kartaa diiwaanka talaalka ardaygaaga EXC.HEALTHOFFICE@minnetonkaschools.org
Tallaalada ayaa looga baahan yahay ardayda kahor kindergarten-ka si ay u-hoggaansamaan.
Taxadar badan, ma aqbali karno dawooyinka xanuun joojiyaha ee madax xanuunka iyo xanuunnada kale iyo xanuunnada. Haddii ilmahaagu caadi ahaan u qaato xanuun joojiyeyaal biraha, tusaale ahaan, fadlan sii qadar daawo joojiye xanuun kahor intaadan ku soo celin dugsiga kadib ballanta.
Fadlan u isticmaal Skyward si aad ugu sheegto maqnaanshaha ardaygaaga. Halkan guji si aad u hesho tababbar caawimaad leh.
2020-21 Dhacdooyinka Ku-laabashada-Iskuulka
Taariikh Waqtiga Dhacdo
Isniin, Agoosto 31-Jimce, Sept. 4 N / A
La kulan Macallinka Furan
La kulan mac-hadka furan ee loo yaqaan 'Open Open House' wuxuu noqon doonaa mid cajiib ah sanadkaan
U fiirso e-mayl inta lagu jiro usbuuca Ogosto 31 oo leh xiriiriyaha fiidiyowga ama Google Chat si laguugu soo dhoweeyo oo laguu siiyo macluumaadka aasaasiga ah ee loo baahan yahay ka hor bilowga dugsiga.
Arbacada, Agoosto 28
Qaybinta iPad, barta elektaroonigga oo keliya (banaanka hore ee albaabka hortiisa)
iPads loogu talagalay bartayaasha fogaanta waxaa laga soo qaadan karaa dugsiga hoose ee Excelsior Elementary School
Haddii aad hayso buugaag maktabadda oo aad soo celiso tani waxay sidoo kale noqon kartaa wakhti fiican oo lagu soo celiyo alaabtaas
Talaado, Sebtember 1
9:00 am -12: 00 pm
Darajooyinka K-3 ee Daawaynta (soo galitaanka hore ee banaanka)
Ku daadi meel ka baxsan albaabka hore ee Dugsiga Hoose ee Excelsior
Arbacada, Sept. 2 3: 30-5: 30 pm
Fasalada 4-5 Daawaynta Dugitaanka
Ku daadi meel ka baxsan albaabka hore ee Dugsiga Sare ee Minnetonka
Dib-ugu-noqoshada Kheyraadka Dugsiga
2020-21 Kalandarka Aqoonta
Caafimaadka iyo Tallaalada
Haddii aad hayso wax su'aalo ah ama ra'yi ah oo ku saabsan waxkasta oo la xiriira dugsiga, fadlan halkan ugu gudbi.
Dugsiga Hoose ee Ka Banan /